रेखा थापालाई लाग्यो लक, जान्नुस् कसरी ? « Ramailo छ
रेखा थापालाई लाग्यो लक, जान्नुस् कसरी ?
नायिका तथा निर्मात्री रेखा थापाले फिल्म वितरण प्रणाली पनि सुरुवात गरेकी छिन् । ‘म यस्तो गीत गाउँछु’ बाट रेखा इन्टरटेनमेन्टले फिल्म वितरण सुरुवात गरेको हो । रेखासँग वितरक गोपाल कायस्थ र निर्माता रमेश पौडेलले पनि सहकार्य गरेका छन् । भ्याली बाहिर फिल्म वितरण गर्ने एफडि कम्पनीमा रेखा सुरुवातदेखि नै आवद्ध छिन् ।
पहिलो पटक सुरु गरेको फिल्म वितरण प्रणालीमा रेखालाई लक लागेको छ । किनकी फिल्म ‘म यस्तो गीत गाउँछु’ ले शुक्रबार राम्रो व्यापार गरेको छ । सुदर्शन थापा निर्देशित फिल्मले देशैभर हाउसफूलको व्यापार गरेको छ । ‘म यस्तो गीत गाउँछु’ मा पल शाह र पूजा शर्मा मुख्य भूमिकामा प्रस्तुत भएका छन् । पहिलो पटक नै लक लागेपछि रेखाले फिल्म निर्माण र अभिनयसँगै वितरणलाई पनि एक साथ अगाडी बढाउने बताइन् । ‘अब फिल्म निर्माण, अभिनय र वितरणलाई पनि सँगै लैजान्छु’ रुद्रप्रिया सुटिङमा रहेकी रेखाले भनिन् ।